Qoyaanka ugu fiican ragga | Ragga Stylish
Dad badan Kareemka qoyaanka ee wejiga ninku wuxuu durbaba noqdaa wax caadi ah. Waxay muhiim u tahay qaar badan oo ka mid ah bacaha musqusha mana ahan wax ka yar, hubaal muddada dheer ee ay muujineyso waxaanan arki karnaa sida daryeelku u kobcayo. Fuuq baxa maqaarku waa qaybta aasaasiga ah ee daryeelka noocan ah.
Nadiifinta maqaarka sifiican iyo ureynta qoyaan wanaagsan waa talaabooyinka lagama maarmaanka u ah muuji maqaarka weyn ee wejigaaga. Laakiin kaliya kareemo kasta oo ansax ah ma ahan, waxaan ognahay inay jiraan kareemo aan la tirin karin oo suuqa yaala oo leh astaamo aad u jaban oo nooc kasta oo maqaar ah ah.
Maskaxda ku hay in maqaarka ragga waa in loo daryeelaa si ka duwan tan dumarka. Tan, waa in lagu sharraxaa in kareemka haweenku uusan noqon doonin mid aad u ansax ah, maaddaama maqaarka ninku uu aad u dhumuc weyn yahay oo uu leeyahay saliid wuxuuna u baahan doonaa biyo ka duwan. Haddii kareemka saxda ah aan la isticmaalin waxaa jira halis guduudasho, isku-dhafnaan, qallalan ama maqaarka saliidda leh oo siyaado ah.
1 Sidee loo doortaa qoyaanka ugu fiican?
2 Talooyin ku saabsan sida loo mariyo qoyaanka wejiga
3 Qoyaanka ugu fiican ragga
3.3 Kareemka Qoyaya Ey
3.5 Nidaamka Dior Homme Dermo
Sidee loo doortaa qoyaanka ugu fiican?
Waxaa jira baaro taas oo ah nooca maqaarka wajiga si aad u dalbato kareemka ku habboon. Maqaarka saliida leh ma raaci doono daaweyn la mid ah tan maqaarka oo qalalan ama isku dhafan, waana taas sababta ugu wanaagsan ee qoyaanku ugu habboon yahay kan ku habboon nooca maqaarkaaga.
Maqaarka dufanka leh waxaa lagu talinayaa isticmaalka kareem khafiif ah oo aan lahayn baruur xad-dhaaf ah, laakiin waxay siinaysaa dareen ah inaanu miisaan lahayn iyo in markii lagu dabaqo dareenkaas cusub ee cusub
Maqaarka qalalan, waxyaabo badan ayaa loo baahan doonaa marka laga reebo walxaha dufanka leh si loo dheelitiro maqaarka. Kareemadan waa inay ku jiraan antioxidants iyo waxyaabo ka hortagga gabowga. Hal talo ayaa ah inaad isticmaasho kiriimyada si dhakhso leh wax u dhuuqa oo aan ku siin doonin dareemo dufan leh markaad codsato kadib.
Maqaarka isku dhafan kareem dhexdhexaad ah ayaa loo baahan doonaaKiriimyadan waa inay lahaadaan awood ay ku waraabin karaan aagagga saliida leh iyo kuwa qalalanba si isku mid ah. Waxay noqon doontaa kareem khafiif ah, oo leh dareer u eg.
Talooyin ku saabsan sida loo mariyo qoyaanka wejiga
Mar alla markii aad aqoonsatid nooca maqaarkaaga oo aad soo iibsato kareemka ku habboon, waa inaad ogaataa inay tahay inaad raacdo hawl maalmeedka iyo mari kareemka subaxa iyo habeenkii. Waa inaad nadiifis fiican ka sameysaa maqaarka kahor intaadan kareemka wajiga marin, waxbadan ayaad ka akhrisan kartaa daryeelka wajiga isku xirkaan Haddii aad xiirtay waa inaad ogaataa in kareemka ay tahay in mar dambe la mariyo, waxay sidoo kale kaa caawin doontaa yareynta dareenka gubashada iyo casaanka.
Waxaan gacanta ku haynaa noocyo kala duwan oo alaab ah oo loogu talagalay wajiga. Waa shey kor u kacaya, maaddaama ragga ay si isa soo taraysa ugu dhex jiraan isticmaalka walxaha loogu talagalay daryeelkooda shaqsiyeed.
Waa wax soo saar oo leh natiijooyin aad u wanaagsan oo ka mid ah iibiyaasha ugu fiican. Waa huuriye ka caawiya ka hortagga muuqaalka laalaabkii, jilciya khadadka ganaaxa, midab beddelka iyo isbeddellada jirka. Waxay ka kooban tahay Vitamin A ama Retinol oo gacan ka geysan doona dib-u-soo-nooleynta unugyada maqaarka ee dhintay kana dhigaya mid aad u qurux badan. Natiijooyinka ugu wanaagsan, waxaa la adeegsan karaa labadaba subaxdii iyo habeenkii.
Waa jel aad u xoog badan oo qoyan lehna muuqaal qurxan adigoon culeys ku darin maqaarkaaga. Waa mid ka mid ah kareemada aad jeceshahay maxaa yeelay si dhakhso leh ayey u nuugaan, way cusub yihiin waxayna maqaarka uga dhigayaan kuwo jilicsan oo raaxo leh maalintii oo dhan. Waxay ka kooban tahay Thermal Plankton iyo walxaha raad raaca kuleylka oo la jaan qaadaya dhammaan noocyada maqaarka labka.
Kareemka Qoyaya Ey
Kareemkaan Waxaa loogu talagalay dhammaan noocyada maqaarka ragga. Waxaa ku jira maaddooyin dabiici ah: Aloe Vera, Camellia Oil iyo Shaaha Cagaaran. Udgoonkeedu waa kufiican yahay mahadnaqa 8-da saliida ee lagama maarmaanka ah ee siiya taabashada lab. Waxay bixisaa fuuq-bax weyn, jilicsanaan iyo uumeyn maqaarka. Waxaa lagugula talinayaa inaad mariso subaxda iyo habeenkii, wajiga iyo qoorta.
Qurxintaani waxay ku habboon tahay inay ku jirto kareem leh jilic jilicsan oo caan ku ah soo dhicitaankiisa degdegga ah. Waa la ogaan karaa sida maqaarku u yaraynayo qallaylkiisa isla markaaba iyo fuuqbaxa oo loo hagaajiyo. Dhismaheeda Difaaca Burburka ayaa muuqda, oo la dagaallamaya astaamaha gabowga.
Nidaamka Dior Homme Dermo
Kareemkan waa emulsion dareere ah oo si dhakhso leh ayuu maqaarka u dhex galaa oo si qoto dheer u waraabiyaa. Waxay ka kooban tahay walxo firfircoon biofermented si loo ilaaliyo dheelitirka dhirta maqaarka ee kaa caawin doonta ilaalinta caafimaadka wanaagsan ee maqaarka wajiga. Maadada kale ee muhiimka ah waa Fiitamiinkeeda E si looga ilaaliyo xadgudubka deegaanka.
Ficil ahaan kareemada oo dhan waxaa loogu talagalay dhamaan noocyada maqaarka waxayna ka caawiyaan heer ka hooseeya ama ka sii weyn si loo qoyo maqaarka loona ilaaliyo qallaylkiisa. Waxaa jira noocyo badan oo loo heli karo macmiilka suuqa dhexdiisa oo hadda dhammaantood waxay ka kooban yihiin waxyaabo dabiici ah oo natiijo wanaagsan leh. Ha iloobin in daryeel fiican oo maqaarkaaga ah ay tahay inaad marsato qorrax madoobaad, maadaama aad ka hortageyso in lagu ciqaabo wax ka badan inta caadiga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Qoyaanka ugu fiican ragga